Izantyalantyala zemvula zibashiye bengo dingezweni abahlali base Siqalo – Elitsha
1st June 2014 Mzi VelapiCape Town, Oorhulemente basemakhaya, Trial edition 2 0 Xhosa
uThembisa usibonisa apho umntana ebetshone khona.
Izantyalantyala zemvula zakutshanje zibashiye bebambelele ezidleleni abo bahlala kwindawo zembacu e Kapa nakwindawo yogobityholo iSiqalo. Ngokwengxelo ye City of Cape Town Disaster Management Centre, bangaphezulu kwamawaka asibhozo abahlala kwindawo yembacu e Kapa abathe bagutyungelwa zimpuphuma. Bathi banikeze ngokutya kubantu abangamawaka asixhenxe, oomatrasi abangamakhulu amabini baye banikezelwa eluntwini.
Enye indawo ethe yagutyungelwa zimpuphuma siSiqalo. Le ndawo yogobityholo isecaleni kwe Vanguard Drive e Mitchel’s Plain. Le ndawo yaqala ngonyaka ka 2012, kwaye yakhawuleza yanda ngabantu abasuka kwilokishi ezikufutshane abangena ndawo yokuhlala okanye umhlaba wokwakha. Ngoku seyilikhaya kubantu abangaphezu kwamawaka asithandathu., kwaye yenye yendawo ezintsha apha e Kapa. Umhlaba emi kuwo iSiqalo ngowenkampani ekuthiwa yi Lyton Props Twelve, kwaye yindawo esisigingqi, le nkampani eyenzele ukomba isanti.
Kuthe xa iElitsha iseSiqalo yadibana nelungu le Housing Assembly, umbutho olwela izindlu nenkonzo eziphucukileyo, u Sheryl Van Reenen. Lo ka Van Reenen uye wasidibanisa no sihlalo wasekuhlaleni u Thobile Dyantyi. U Thobile uye wasichazela ngendlela athe wonyula umntana omncinci obetshone phambi kwechibi ebelenzeke phambi kwe cawe. Ngokutsho komzali womntana u Tembisa Xingwana umntana lo ebedlala nabanye phandle, kwaye indlu le ikufutshane necibi eli livele emva kwemvula. Utembisa uthi uve ngabanye abantwana ukuba umntwana wakhe utshonile, kwaye kobizwa abahlali ukuzokumonyula.
Ngenxa yendawo ekuyo iSiqalo kuba isesigingqini nento yokuba akukho ndlela yokutshona kwamanzi xa kunetha, kuye kubekho amachibi eSiqalo. Lendawo yenye yeyona ndawo zihlala abantu abahluphekileyo e Kapa engenazindlu zesigxina. Ngenxa yokuba umasipala enyanzeliswa ngumgaqo-siseko wathi wavakela izindlu zangasese zeplastiki namanzi. Amawaka angamathandathu abantu axhomekeke kwi mpompo ezilithoba. Zonke ezi nkonzo zikwicala elinye le lokishi. Lonto ithetha ukuba abao bahlala kude kunazo kufuneka behambe umgama ongange khilomitha ukuyokha amanzi okanye baye ngasese. Kukho ityala elisamisiweyo ngeSiqalo nakwindawo eme kuyo.
Also read: Abezempilo benza uvavanyo lwesifo sephepha kwizikolo zaseKhayelitsha